किन सलमान खान बिहे गर्न चाहदैनन ? यस्तो छ कारण ? - jagritikhabar.com
किन सलमान खान बिहे गर्न चाहदैनन ? यस्तो छ कारण ?
बलिउडका सुपरस्टार सलमान खान अहिले ५५ बर्षका भए तर पनि बिबाह भएको छैन । आफ्नो फिल्मि करियरमा उनको नाम दर्जनौ चर्चित नायिका तथा सुरा सुन्दरीहू संग जोडिदै आएको छ ।
उनको संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ लगायतका सुन्दर नायिका संग नाम जोडिसकेको छ । तर पनि उनी ५५ बर्षको भइसक्दा पनि सिंगल नै छन् ।
उनको जिन्दगीमा धेरै सुरा सुन्दरीहरुले इन्ट्रि त मारे तर पनि सलमानसंग घरबार बसाउन सकेनन् । तर यसो हुनुमा उनले आफ्नै कारण देखाएका छन् । उनले पहिलो पटक एक अन्र्तबार्तामा आफ्नो रिलेशनसिपका बिषयमा मुख फोरेका हुन् ।
अन्र्तबार्तामा उनलाई घरमा बिबाहको कुरा हुन्छ कि हुदैन भनेर सोधिएको थियो तर उनले हाँसेरै टारीदिएका थिए । न्र्तबार्ताकारले लुलिआ बन्तुरलाई लिएर सलमान खानलाई कसै संग डेट चलिरहेको छ कि भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले आफु कहिले पनि रिलेशनसिपमा बिल्कुलै राम्रो नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।